Xog: Abaabulka mooshin ka dhan ah Cabdi Xaashi oo ka socda Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Xog: Abaabulka mooshin ka dhan ah Cabdi Xaashi oo ka socda Muqdisho
Xog: Abaabulka mooshin ka dhan ah Cabdi Xaashi oo ka socda Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho waxaa ka socda isku day abaabulka mooshin ka dhan ah guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, kaasi oo gadaal ay ka riixeyso Villa Somalia.
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa sheegeysa in xalay ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed uu kulamo la qaatay Senatoro ka tirsan Golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo wada abaabulka mooshin ka dhan ah Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha Aqalka Sare.
Abaabulka mooshinkan ayaa sidoo kale waxaa qeyb weyn ka wada Senatoro ka tirsan Golaha Aqalka Sare, waxaana lagu bixinaya kumanaan lacag ah.
Wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in kulamadaan xubno kamid ah Golaha Shacabka ay qeyb ka ahaayeen, waxaana lagu qabtay laba hoteel oo ku yaalla Muqdisho.
Waxyaabaha la isku soo hadal qaaday waxaa kamid ah in xubnaha kasoo horjeeda Cabdi Xaashi aysan marna kulamada Cabdi Xaashi iclaamiyo ee Aqalka Sare ilaa amar dambe iyo in la sameeyo kulamo kale oo lagu diyaariyo mooshin kaas oo si deg deg ah la horgeyn doono Fadhiga Aqalka Sare.
Abaabul xoog leh ayaa ka jira magaalada Muqdisho, kaas oo ku saabsan khilaafka Golaha Aqalka Sare ee baarlamanka Soomaaliya
Waxaa aad usii xumaanaya khilaafka ka jira guddoonka Aqalka Sare kaas oo la aaminsan yahay iney gadaal ka riixeyso Villa Somalia.
Villa Somalia ayaa ka carrootay markii uu guddoomiyaha Aqalka Sare iclaamiyey shir dhex-mara dowladda Soomaaliya iyo maamul gobaleedyada dalka, inkasta oo madaxtooyada ay markii dambe ogolaatay shirkaas, kadib cadaadis ka yimid beesha caalamka.